» मलाइ केही भए, कस्ले जिम्मा लिने ?मेरो जीवन माथी खेल्वाड गर्न कसैलाइ अधिकार छैन ! भन्दै चियावाली मिडियामा आइन, (भिडियो सहित) मलाइ केही भए, कस्ले जिम्मा लिने ?मेरो जीवन माथी खेल्वाड गर्न कसैलाइ अधिकार छैन ! भन्दै चियावाली मिडियामा आइन, (भिडियो सहित) – हाम्रो खबर
मलाइ केही भए, कस्ले जिम्मा लिने ?मेरो जीवन माथी खेल्वाड गर्न कसैलाइ अधिकार छैन ! भन्दै चियावाली मिडियामा आइन, (भिडियो सहित)
पछिल्लो समय मा सामाजिक संजाल मा भाइरल चियावाली श्रृष्टि तामागं आज मैले नाम कमाएको छु भोलि मेरो बदनाम नहोस म मेरो श्रीमान लाई धेरै पटक हामीलाई छोडेर नजानु भनेर भनेको थिए। हाम्रो परिवारको बारेमा बाहिर कुनै कुरा लिन चाहदिन भन्दा पनि मेरो कुरा नसुनी जानुभयो यदि हामी केहि भयौ भने जिम्बेवारी श्रीमान हुनुपर्छ। मैले आज सम्म कसैसंग मागेर खाको छैन आफ्नै पसिना बगाएर खाएको छु मेरो छोरि पालेको छु हामी यसैमा खुसि छौ। मेरो बारेमा नराम्रो कुरा भनेर मलाई बाच्न नहुने नगराउनु , छिछि नगराउनु हामी खुसि साथ बाच्न चाहन्छौ , यदि हामीलाई केहि भयो भने तपाई जिम्बेवारी हुनुपर्छ।
चियावाली श्रृष्टि तामागंको पहिले नै बिहे भएको खुलेको छ। श्रृष्टि आफै भन्छिन हो मेरो पहिलो बिहे बएको थियो मेरो छोरा पनि जन्मेको छ तर हाम्रो कानुनि नियम अनुसार डि’भो’र्स भएको हो। मलाई मेरो छोरा भेट्न मा कुनै रोकावट गरेको छैन , मेरी चिरी जस्तै छोरा लाई पनि माया गर्छु। छोरा को लागि पनि मैले पैसा जम्मा गरेको छु , भनेकी छिन। मेरो छोरा भेट्न मन छ भनेर म उनको इच्क्षा बिरुद्ध जादिन।
चियावालीका नाममा अहिले सा’माजिक स’ञ्जालमा चर्चित रहकी श्रृष्टि तामागंको श्रीमानको बारेमा अर्को ठूलो र’ह’स्य खु’लेको छ । उनी श्रृष्टिलाई अ’ल’पत्र पारेर लु’के’र ब’स्नुको कारण भने अर्कै रहेछ । लकडाउनको बेलामा श्रीमती श्रृष्टिलाई ए’क्लै कोठामा छो’डेर स’म्प’र्क वि’हि’न भएका उनका श्रीमानको नाम वुद्धिबहादुर तामागं हुन् । श्रीमानले अ’ल’पत्र पारेपछि श्रृष्टि चिया बे’चेर आफ्नो र छोरीको पे’ट पा’ल्दै आएकी छन् ।
एक जनाले उनको बारेमा तस्बिर खिचेर सा’माजिक स’ञ्जालमा पोष्ट गरेपछि उनी चर्चित भएकी हुन् । अहिले उनका बारेमा भिडियो सामाग्री प्र’शारण भएपछि थप चर्चित भइन् । उनी चर्चित भएपछि श्रीमानका बारेमा पनि खोजी सुरु भएको हो । श्रीमान किन सम्पर्क विहिन भए भन्ने बारेमा श्रृष्टिलाई थाहा थिएन । उनले आफुलाई अ’प्ठे’रो परेको बेलामा श्रीमानले पनि छोडेर गएको भन्दै भिडियोमा भनेपछि उनका श्रीमानका बारेमा पनि चा’सो बढेको हो ।
खोजी हुँदै जाँदा उनका श्रीमानको बारेमा थप कुरा खुलेको हो । उनले इ’राक लगिदिन्छु भन्दै गाउँका सा’झालाई ठ’ग्ने गरेको खुलेको छ । उनले गाउँका युवा युवतीलाई प्र’लो’भनमा पारेर विदेश पठाइदिछु भन्दै पैसा उठाएको प्र’मा’ण फे’ला परेको हो । श्रृष्टिवारे भिडियो सा’र्वज’निक भएपछि उनका श्रीमानका बारेमा खो’जी सुरु भएपछि बुद्धिले स’म’स्यामा पा’रेकाहरु पनि मिडियामा आएका हुन् ।
उनीहरुले श्रृष्टिको श्रीमानले पैसा लिएर विदेश पठाइदिन्छु भन्दै ठ’गेको भन्दै कागज देखाउँदै सा’र्व’जनिक भएका छन् । केही युवाहरुले साक्षी बसेर बुद्धिलाई पैसा दिएका थिए । वुद्धि स’म्पर्क वि’हिन भएपछि सा’क्षी बसेकाहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । यति हुँदा पनि बुद्धि भने सम्पर्कमा आएनन् । बुद्धिको गाउँमा युट्युवर पुगेको थाहा पाएपछि ठ’गीमा परेकाहरु आफ्ना प्र’माण लिएर युट्यु’वरकहाँ प्रमाण देखाउन पुगेका थिए ।